Anya n'azụ ihe nkiri dị ịtụnanya nke IMEX America na-adịgide adịgide
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Anya n'azụ ihe nkiri dị ịtụnanya nke IMEX America na-adịgide adịgide
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Njem na MGM Resorts Mega Solar Array.
Nke a na-ewe "n'azụ ihe nkiri" na ọkwa ọhụrụ! MGM Resorts kwadoro njem nlegharị anya maka ndị IMEX America ndị bịara Mega Solar Array maka ileba anya na saịtị ahụ nke na-enye ikike Las Vegas ha.
Njem a mere n'ọzara na saịtị 640-acre na Nevada ma bụrụ akụkụ nke Smart Monday na IMEX America.
N'ebe ahụ, ndị bịaranụ nwere ohere ịhụ ka ọkụ eletrik sitere na anyanwụ site n'iji igwe ọkụ 300,000+.
Nke a bụ naanị otu njegharị nke ọtụtụ ndị IMEX mepụtara dịka akụkụ nke mmemme mmepe ọkachamara ya na mmemme mmekọrịta ọha.
Njem ahụ na saịtị 640-acre dị n'ọzara bụ akụkụ nke Smart Mọnde, nke MPI kwadoro.
Otu ndị bịara 25 gara leta ọnọdụ okike dị ịtụnanya iji chọpụta otú ọkụ eletrik sitere na mbara igwe sitere na ogwe 300,000+, ka esi kesaa ya na grid maka ihe onwunwe MGM, yana otu o si enyere aka belata ikuku griin haus na-eme ka ihe omume enyi na enyi dịkwuo mma.
IMEX America a na-eme ugbu a na ụlọ MGM, Mandalay Bay, site na Nọvemba 9 – 11.
Njem ahụ bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ndị IMEX mepụtara na ndị mmekọ ya dị iche iche dịka akụkụ nke mmepe ọkachamara ya na mmemme mmekọrịta ọha na eze na-egosi mbipụta 10 nke ihe ngosi ahia ahia ụwa maka ụlọ ọrụ ihe omume azụmahịa zuru ụwa ọnụ.